အနုပညာရှငျတှဈေေးရောငျးလို့ ဈေးသညျတှထေိခိုကျတယျဆိုတာကို ဖွရှေငျးလိုက်တဲ့ ယုနျလေး - Cantwait2say
June 1, 2020 wadi Cele, News 0
ယုနျလေးဟာဆိုရငျ အနုပညာညီအဈကိုမောငျနှမတှကေိုလညျး ခဈြခငျပွီးကူညီတတျသလို တကျသဈစအဆိုတျောလေးတှကေိုလညျး မွတေောငျမွှောကျပေးပွီး ခကျခဲနသေူတှကေိုလညျးတတျအားသမြှလိုကျလံကူညီတတျတဲ့ သဘောကောငျးပွီး စိတျထားပွညျ့ဝတဲ့အနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ ယုနျလေးက စိတျထားဖွူစငျပွီး လူတကာကိုကူညီတတျသလို အမွဲတမျးအကောငျးမွငျတတျသူတဈဦးပါ။
လကျရှိမှာ အနုပညာရှငျတှကေ ဈေးတှရေောငျးနတောကွောငျ့ သာမနျဈေးရောငျးသူတှထေိခိုကျရတယျလို့ ပွောနကွေတာနဲ့ပတျသကျပွီး ယုနျလေးကသူ့ရဲ့ လူမှုကှနျယကျပျေါမှာ ရှငျးပွထားခဲ့တာတှရေ့ပါတယျ။ ယုနျလေးက သူဒီလိုပွောတာကို အနုပညာရှငျတှဘေကျက ကာကှယျပွောတယျလို့ မမွငျပါနဲ့လို့အစခြီပွီးအနုပညာရှငျတှဈေေးရောငျးရတဲ့အခွအေနတှေကေို ရှငျးပွသှားခဲ့တာပါ။ ယုနျလေးက “အနုပညာရှငျတှေ ဈေးရောငျးတာနဲ့ ပကျသကျပွီး ပွောဆိုနကေတြာ စိတျမကောငျးပါဘူး အခုပွောမယျ့ စကားကို အနုပညာရှငျ အခငျြးခငျြးကာကှယျတယျလို့ မမွငျစခေငျြပါဘူး အနုပညာရှငျ တှရေဲ့ ဘဝတှကေို အတှငျးကကြသြိလို့ပါ .အနုပညာရှငျတျောတျောမြားမြား စီးပှားရေး နားမလညျဘူး .ဥပမာ မွငျ့မွတျပေါ့ ကားရိုကျတာကလှဲရငျသူဘာမှမသိဘူးCovid ဖွဈတယျ အကုနျအဆငျမပွကေဘြူး .ပုံမှနျ ဝငျငှေ မရှိတဲ့ အခြိနျမှာ ပုံမှနျဝငျငှပွေနျရှိအောငျ လူတိုငျးဖနျတီးရမှာပဲ . တကျကြိူးရငျ လကျနဲ့ လှျောရမှာပဲလထေိုငျနလေို့မှ မရတာ .ဗီဒီယိုလောက ပကျြစီးသှားထဲက အလုပျလကျမဲ့မြားသှားလို့ On Line မှာဈေးရောငျးတဲ့လူတှစေားသောကျကုနျ အနညျးငယျလေးရောငျးတဲ့ လူတှေ အစထဲကရှိပါတယျ Covid ဖွဈတော့ ပုံမှနျလညျပတျနိုငျအောငျမကြှမျးကငျြတဲ့ အလုပျကို အရဲစှနျ့ပွီး စမျးတဝါးဝါး လုပျကတြယျ. အောငျမွငျမယျ ဘယျသူ့မှ မထငျထားပါဘူး. ပရိတျသတျတှကေ ခဈြပွီး မထငျထားတဲ့ အရာတှေ ဖွဈတော့အလုပျအဆငျပွရေငျ လူတိုငျးပြျောတယျလေ . တဈယောကျစကား တဈယောကျပေါ့ အဲ့လိုလုပျရငျးနဲ့ အရမျးမြားလာတာပါ .တဈခြို့တှကေကတြော့ ပိုကျဆံ အဆငျပွရေဲ့သားနဲ့ဘာလို့ရောငျးလဲဆိုတော့ လူပျရှားနတေဲ့ လူတှေ အခြိနျကွာကွာ Stay Home ဆိုတော့ မနနေိုငျကဘြူးလေ. ပငျြးလို့ရောငျးကတြာပါ. တဈခြို့တှကေတြော့လညျး တကယျကို အဆငျမပွတော ရောငျးမှဖွဈမယျ့ အနထေားတှမေို့လို့ပါ”လို့ ရှငျးပွထားခဲ့ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ဈေးရောငျးနကွေတဲ့ အနုပညာရှငျတှဟော အခွားဈေးရောငျးနတေဲ့သူတှကေို ထိခိုကျစခေငျြတဲ့ ရညျရှယျခကျြမရှိဘူးလို့လညျး “ဝါသနာက ဝမျးစာ လူတိုငျးတဈထပျတညျးကခြငျြကတြာ လူတိုငျးပါ . ကငျမရာရှေ့ မိုကျကရိုဖုနျးရှေ့ . ရူတငျ . Studio မှာပဲ ကွီးပငျြးခငျြတဲ့လူတှေ အသား . ငါးဆေး . ဈေးဝယျ ဟငျးခကျြဘယျသူက လုပျခငျြမှာလဲ လုပျတဲ့လူတှကေို ဆျောကားတာမဟုတျပါဘူး သူတို့မကြှမျးကငျြတဲ့ အလုပျမို့လို့ပါ။ နားလညျ ပေးစခေငျြပါတယျ ခငျမြား သူတို့တှမှော ဈေးသညျတှေ ထိခိုကျစဆေိုတဲ့ရညျရှယျခကျြလုံးဝ လုံးဝ မရှိပါဘူး . အလုပျမရှိတဲ့ လူတနျးစားတဈခြို့တှကေိုပါသူတို့ အလုပျပွနျပေးလာနိုငျပါတယျ” လို့ ပွောပွထားပါတယျ။
ယုနျလေးက အခွား ဈေးရောငျးသူတှအေတှကျလညျး ကူညီခငျြကွောငျးနဲ့ ကူညီမယျ့အစီအစဉျကို ပွောပွထားပါသေးတယျ။ “တဈခြို့ ထိခိုကျတဲ့ ဈေးရောငျတဲ့ ညီအဈကို မောငျနှဈမတှေ ထိခိုကျကောငျးလညျး ထိခိုကျနိုငျပါတယျ .အဲ့ ညီအဈကို မောငျနှဈမတှေ အတှကျ ကြှနျတျော ကူညီနိုငျတာကတော့ .အိမျကို စားစရာ လုံးဝမပို့ပါနဲ့ . Fb ကနေ ဆိုငျနာမညျ နဲ့ ဆကျသှယျရမယျ့ လိပျစာ . ဈေးနှူနျး . အစားအသောကျကိုဓာတျပုံ လှလှလေး ရိုကျပို့ပေးပါ .ကြှနျတျော အခမဲ့ ကွညောပေးပါမယျ့ ခငျမြား .Fb မှာ အနုပညာရှငျတှကွေညောပေးပွီ တငျပေးရငျ အနုပညာကွေး ဆိုတာရှိပါတယျ .ဒီ Covid မှာ နတေို့ငျး စားစားပွနတောက ကြှနျတျောလညျး အကုနျ မစားနိုငျပါဘူး . ကိုယျရငျးနီးတဲ့ လူတှေ အဆငျပွပေါစဆေိုတဲ့စိတျလေးနဲ့ မတ်ေတာနဲ့ တငျပေးနတောပါ .အစားသောကျတဈပှဲ နှဈပှဲ ဘယျလောကျရှိလို့လဲဗြ . ဒီတိုငျးဝယျစားလညျးရပါတယျ . အနုပညာရှငျတှတေငျရငျ ရတဲ့ပမာဏ နဲ့ ဘာမှမဆိုငျပါဘူး .ဒါပမေယျ့ တောကျလြောကျ မတ်ေတာနဲ့ တငျပေးနတော ကြှနျတျောတငျလိုကျရငျ လာအားပေးကတြယျ .အဆငျပွကေတြယျဆိုတာလေးတဈခုနဲ့ အဆငျပွပေါစေ ဆိုတဲ့စိတျနဲ့ပါ . အခုလညျး တကယျခကျခဲနတေဲ့ ဈေးရောငျးတဲ့ မညျ့သူမဆို အပွညျစုံ မနျ့ပေးပါ . ပုံကတော့ တဈပုံထဲပေးပါ ဈေးရောငျးနတေဲ့ လူတိုငျးကို ကြှနျတျော Post တဈခုမှာ ပေါငျးပွီး သခြောတငျပေးပါ့မယျ . အမွဲတနျးတော့မတငျဘူးပေါ့ .ကြှနျတျောလညျး ကြှနျတငျစရာတှရှေိလို့ပါ .အဲ့လိုပဲ အနုပညာရှငျတှလေညျး စိတျဓာတျမသေးသိမျကပြါဘူး .တကယျအဆငျမပွရေငျ ပို့လိုကျပါ .တဈခွားဈေးရောငျးနတေဲ့ Covid မှာ ဈေးသညျဘှဲ့ရသှားတဲ့ကြှနျတျော ခဈြသောတှေ ဥပမာ ထူးခွား မပှငျ့နဒီမောငျမိုးမိုး . တခွားတခွား သူတို့လညျး ဝိုငျးကွညောပေးကမြှာပါ.အားလုံး Peace . အားလုံး အဆငျပွကွေပါစေ” လို့ မတ်ေတာရှထေ့ားပွီးပွောပွထားတာလညျးတှရေ့ပါတယျ။
ပွောခငျြလှနျးလို့ပရိသတျကွီးထဲမှာ ဈေးရောငျးနတေဲ့သူတှရှေိရငျလညျး ရောငျးကောငျးပွီးအဆငျပွအေောငျ ကိုယုနျလေးရဲ့ကူညီမယျ့အစီအစဉျလေးကို ပွောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။ ပရိသတျကွီးရော သဘောကောငျးပွီးကူညီတတျတဲ့ ယုနျလေးကိုခဈြကွလား။ ယုနျလေးရဲ့နောကျထပျအနုပညာအလုပျတှကေိုရော အားပေးကွမှာလား။ပွောခဲ့ကွပါဦး။
ယုန်လေးဟာဆိုရင် အနုပညာညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေကိုလည်း ချစ်ခင်ပြီးကူညီတတ်သလို တက်သစ်စအဆိုတော်လေးတွေကိုလည်း မြေတောင်မြှောက်ပေးပြီး ခက်ခဲနေသူတွေကိုလည်းတတ်အားသမျှလိုက်လံကူညီတတ်တဲ့ သဘောကောင်းပြီး စိတ်ထားပြည့်ဝတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ယုန်လေးက စိတ်ထားဖြူစင်ပြီး လူတကာကိုကူညီတတ်သလို အမြဲတမ်းအကောင်းမြင်တတ်သူတစ်ဦးပါ။
လက်ရှိမှာ အနုပညာရှင်တွေက ဈေးတွေရောင်းနေတာကြောင့် သာမန်ဈေးရောင်းသူတွေထိခိုက်ရတယ်လို့ ပြောနေကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ယုန်လေးကသူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ရှင်းပြထားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ ယုန်လေးက သူဒီလိုပြောတာကို အနုပညာရှင်တွေဘက်က ကာကွယ်ပြောတယ်လို့ မမြင်ပါနဲ့လို့အစချီပြီးအနုပညာရှင်တွေဈေးရောင်းရတဲ့အခြေအနေတွေကို ရှင်းပြသွားခဲ့တာပါ။ ယုန်လေးက “အနုပညာရှင်တွေ ဈေးရောင်းတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပြောဆိုနေကျတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး အခုပြောမယ့် စကားကို အနုပညာရှင် အချင်းချင်းကာကွယ်တယ်လို့ မမြင်စေချင်ပါဘူး အနုပညာရှင် တွေရဲ့ ဘဝတွေကို အတွင်းကျကျသိလို့ပါ .အနုပညာရှင်တော်တော်များများ စီးပွားရေး နားမလည်ဘူး .ဥပမာ မြင့်မြတ်ပေါ့ ကားရိုက်တာကလွဲရင်သူဘာမှမသိဘူးCovid ဖြစ်တယ် အကုန်အဆင်မပြေကျဘူး .ပုံမှန် ဝင်ငွေ မရှိတဲ့ အချိန်မှာ ပုံမှန်ဝင်ငွေပြန်ရှိအောင် လူတိုင်းဖန်တီးရမှာပဲ . တက်ကျိူးရင် လက်နဲ့ လှော်ရမှာပဲလေထိုင်နေလို့မှ မရတာ .ဗီဒီယိုလောက ပျက်စီးသွားထဲက အလုပ်လက်မဲ့များသွားလို့ On Line မှာဈေးရောင်းတဲ့လူတွေစားသောက်ကုန် အနည်းငယ်လေးရောင်းတဲ့ လူတွေ အစထဲကရှိပါတယ် Covid ဖြစ်တော့ ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်အောင်မကျွမ်းကျင်တဲ့ အလုပ်ကို အရဲစွန့်ပြီး စမ်းတဝါးဝါး လုပ်ကျတယ်. အောင်မြင်မယ် ဘယ်သူ့မှ မထင်ထားပါဘူး. ပရိတ်သတ်တွေက ချစ်ပြီး မထင်ထားတဲ့ အရာတွေ ဖြစ်တော့အလုပ်အဆင်ပြေရင် လူတိုင်းပျော်တယ်လေ . တစ်ယောက်စကား တစ်ယောက်ပေါ့ အဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့ အရမ်းများလာတာပါ .တစ်ချို့တွေကကျတော့ ပိုက်ဆံ အဆင်ပြေရဲ့သားနဲ့ဘာလို့ရောင်းလဲဆိုတော့ လူပ်ရှားနေတဲ့ လူတွေ အချိန်ကြာကြာ Stay Home ဆိုတော့ မနေနိုင်ကျဘူးလေ. ပျင်းလို့ရောင်းကျတာပါ. တစ်ချို့တွေကျတော့လည်း တကယ်ကို အဆင်မပြေတာ ရောင်းမှဖြစ်မယ့် အနေထားတွေမို့လို့ပါ”လို့ ရှင်းပြထားခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဈေးရောင်းနေကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေဟာ အခြားဈေးရောင်းနေတဲ့သူတွေကို ထိခိုက်စေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးလို့လည်း “ဝါသနာက ဝမ်းစာ လူတိုင်းတစ်ထပ်တည်းကျချင်ကျတာ လူတိုင်းပါ . ကင်မရာရှေ့ မိုက်ကရိုဖုန်းရှေ့ . ရူတင် . Studio မှာပဲ ကြီးပျင်းချင်တဲ့လူတွေ အသား . ငါးဆေး . ဈေးဝယ် ဟင်းချက်ဘယ်သူက လုပ်ချင်မှာလဲ လုပ်တဲ့လူတွေကို ဆော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူး သူတို့မကျွမ်းကျင်တဲ့ အလုပ်မို့လို့ပါ။ နားလည် ပေးစေချင်ပါတယ် ခင်များ သူတို့တွေမှာ ဈေးသည်တွေ ထိခိုက်စေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လုံးဝ လုံးဝ မရှိပါဘူး . အလုပ်မရှိတဲ့ လူတန်းစားတစ်ချို့တွေကိုပါသူတို့ အလုပ်ပြန်ပေးလာနိုင်ပါတယ်” လို့ ပြောပြထားပါတယ်။
ယုန်လေးက အခြား ဈေးရောင်းသူတွေအတွက်လည်း ကူညီချင်ကြောင်းနဲ့ ကူညီမယ့်အစီအစဉ်ကို ပြောပြထားပါသေးတယ်။ “တစ်ချို့ ထိခိုက်တဲ့ ဈေးရောင်တဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မတွေ ထိခိုက်ကောင်းလည်း ထိခိုက်နိုင်ပါတယ် .အဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မတွေ အတွက် ကျွန်တော် ကူညီနိုင်တာကတော့ .အိမ်ကို စားစရာ လုံးဝမပို့ပါနဲ့ . Fb ကနေ ဆိုင်နာမည် နဲ့ ဆက်သွယ်ရမယ့် လိပ်စာ . ဈေးနှူန်း . အစားအသောက်ကိုဓာတ်ပုံ လှလှလေး ရိုက်ပို့ပေးပါ .ကျွန်တော် အခမဲ့ ကြေညာပေးပါမယ့် ခင်များ .Fb မှာ အနုပညာရှင်တွေကြေညာပေးပြီ တင်ပေးရင် အနုပညာကြေး ဆိုတာရှိပါတယ် .ဒီ Covid မှာ နေ့တိုင်း စားစားပြနေတာက ကျွန်တော်လည်း အကုန် မစားနိုင်ပါဘူး . ကိုယ်ရင်းနီးတဲ့ လူတွေ အဆင်ပြေပါစေဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့ မေတ္တာနဲ့ တင်ပေးနေတာပါ .အစားသောက်တစ်ပွဲ နှစ်ပွဲ ဘယ်လောက်ရှိလို့လဲဗျ . ဒီတိုင်းဝယ်စားလည်းရပါတယ် . အနုပညာရှင်တွေတင်ရင် ရတဲ့ပမာဏ နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး .ဒါပေမယ့် တောက်လျောက် မေတ္တာနဲ့ တင်ပေးနေတာ ကျွန်တော်တင်လိုက်ရင် လာအားပေးကျတယ် .အဆင်ပြေကျတယ်ဆိုတာလေးတစ်ခုနဲ့ အဆင်ပြေပါစေ ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပါ . အခုလည်း တကယ်ခက်ခဲနေတဲ့ ဈေးရောင်းတဲ့ မည့်သူမဆို အပြည်စုံ မန့်ပေးပါ . ပုံကတော့ တစ်ပုံထဲပေးပါ ဈေးရောင်းနေတဲ့ လူတိုင်းကို ကျွန်တော် Post တစ်ခုမှာ ပေါင်းပြီး သေချာတင်ပေးပါ့မယ် . အမြဲတန်းတော့မတင်ဘူးပေါ့ .ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တင်စရာတွေရှိလို့ပါ .အဲ့လိုပဲ အနုပညာရှင်တွေလည်း စိတ်ဓာတ်မသေးသိမ်ကျပါဘူး .တကယ်အဆင်မပြေရင် ပို့လိုက်ပါ .တစ်ခြားဈေးရောင်းနေတဲ့ Covid မှာ ဈေးသည်ဘွဲ့ရသွားတဲ့ကျွန်တော် ချစ်သောတွေ ဥပမာ ထူးခြား မပွင့်နဒီမောင်မိုးမိုး . တခြားတခြား သူတို့လည်း ဝိုင်းကြေညာပေးကျမှာပါ.အားလုံး Peace . အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေ” လို့ မေတ္တာရှေ့ထားပြီးပြောပြထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။
ပြောချင်လွန်းလို့ပရိသတ်ကြီးထဲမှာ ဈေးရောင်းနေတဲ့သူတွေရှိရင်လည်း ရောင်းကောင်းပြီးအဆင်ပြေအောင် ကိုယုန်လေးရဲ့ကူညီမယ့်အစီအစဉ်လေးကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ပရိသတ်ကြီးရော သဘောကောင်းပြီးကူညီတတ်တဲ့ ယုန်လေးကိုချစ်ကြလား။ ယုန်လေးရဲ့နောက်ထပ်အနုပညာအလုပ်တွေကိုရော အားပေးကြမှာလား။ပြောခဲ့ကြပါဦး။